Fumanisa isitayile se-rustic chic ekhayeni lakho | IBezzia
Indlela yokuhombisa kwisitayile se-rustic chic
Susana Garcia | 07/06/2021 20:00 | Ukuhonjiswa, Iindlela zokuhombisa
El Uhlobo lwe-rustic chic luxatyiswa kakhulu kule mihla, ngumxube omkhulu weziqwenga zerustic nezangoku, iidiliya kunye nezangoku. Umahluko liqhinga elihle lokuhombisa, kuba ngale ndlela asinamatheli kuphela kwisitayile esinye kwaye senza izinto ezizodwa nezizodwa. Kuhlala kungcono ukudibanisa izitayile kwaye ufumane ikhaya elinobuntu kunekopi yesitayile esithile esinokudinwa.
El Isitayile se-rustic chic sisitayile senoveli esifuna ukusinika umnqweno omhle ngakumbi kunye nobunkunkqele kwimeko ye-rustic. Ezi ntlobo zemeko ziphefumlelwe lilizwe, iindawo zerustic, apho kukho izinto ezijongeka zirhabaxa kunye neziqwenga ezisebenzayo, kodwa ukubanjwa kwe-chic kuyayinceda ukuba iphucule kwaye iphumeze ubuhle obusilela ngamanye amaxesha.
1 Izinto zendalo
2 Ukukhanya kunye nemibala yendalo
3 Yongeza iintyatyambo kunye nezityalo
4 Ifenitshala yendlela yaseFrance
5 Marble kunye yodongwe
Los izinto zendalo ziyinxalenye ebalulekileyo yesitayela se-rustic, ke asinakwenza ngaphandle kwabo. Iinkuni kwifenitshala, irattan, iibhasikiti ezijijekileyo kunye neziqwenga zamatye zilungile ukudala imeko ye-rustic apho unokongeza khona ukubamba kwe-chic. I-rustic kufuneka ibe yi-protagonist, njengoko isitayile esisiseko. Ifenitshala eyenziwe ngomthi ihlala indala okanye ine-rustic, imbonakalo eyomeleleyo ngaphandle kwemihombiso emininzi. Imigangatho yamatye okanye yamatye nayo isetyenziswa rhoqo. Kwelinye icala, kwizinto ezininzi kusetyenziswa i-wicker, kunye neebhasikiti okanye iiragi kwezi zinto zihle kangaka.
Ukukhanya kunye nemibala yendalo
Kule ndlela, a Chukumisa kakhulu ngakumbi kwiindawo zangoku ze-rustic. Iithoni ezikhanyayo zisinceda ukuba sinciphise olo rustic touch, kuba iimeko zangaphambili zazinomthi omnyama omninzi kunye neetoni ezomeleleyo ezacima amagumbi. Kule meko sijonga imibala efana nabamhlophe, ngwevu kunye ne-beige ngakumbi elula, ethambileyo kwaye ikwabonelela ngobushushu. Kolu hlobo lwendalo ayenzi ngqondo kangako ukujonga iziqwenga zemibala emininzi, kuba kwimeko ye-rustic kuhlala kungekho.
Yongeza iintyatyambo kunye nezityalo
Lo I-rustic inokwenza okuninzi emaphandleni nakwindalo, ke ezinye izityalo azinakuphoswa kwezi ndawo. Kule mihla, izityalo zithathwa ngokubanzi ngaphakathi ezindlwini, ezinkulu nezincinci, ukwenza iikona ezizodwa. Umbono kukongeza ukutsha kunye nombala kunye nezityalo. Khangela izimbiza ezintle kwiimpawu ezikhanyayo okanye ungeze izimbiza ze-wicker.
Ifenitshala yendlela yaseFrance
Nangona sithethile ngamanqaku asikhokelela kwisitayile se-rustic, kufuneka sicinge nangokongeza olona chukumiso lubalaseleyo. Unako oku kubandakanya enye ifenitshala kwisitayela saseFransi. Olu hlobo lubonisa ifanitshala eyakhiwe ngeenkcukacha ezininzi, enesono kunye nemilenze eqingqiweyo. Ukongeza ifanitshala enye okanye ezimbini zefashoni yale ndlela ngaphezu kokwanela ukwenza ukubamba kwe-chic ngakumbi. Ukongeza, isitayile seediliya siyinxalenye yamaqhekeza amaFrentshi kwaye ke siyakube senza imeko ekhethekileyo.
Marble kunye yodongwe
Izinto zeRustic zihlala zirhabaxa kwaye zingahonjiswanga. Kodwa ukwenza indawo entle ngakumbi sinokongeza ezinye iintlobo zezinto. Inkqubo ye- Imabhile intle kakhulu kwaye yiyo loo nto isetyenziswa kwezi meko. Inokuba sisiqwenga somlilo, imiphezulu yeetafile zemabula okanye nokuba ubambe ngaphezulu kwefanitshala. IMarble intle, ngakumbi ukuba sikhetha imibala efana ngwevu nomhlophe. Kwelinye icala, i-ceramic nayo inayo loo nto intle kangaka, ke sinokuyifaka kwiinkcukacha ezincinci ezinje ngee vases okanye amanani okuhombisa. Kwiinkcukacha ezincinci ungabona ubucukubhede obunqabileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Indlela yokuhombisa kwisitayile se-rustic chic